Yay u Tahay Dan Horumarinta Puntilland.
Puntilland waa dhul xadaarad aad u fog leh ilaa heer Boqortooyo aa aan anigu aaminsanahay in la xusana leh hadaba waxaan anigu oran lahaa waxaa dadka qaarkii isaga qasan qof iyo Dal ama dad iyo dal,hadaad tahay wadani waxaa kugu haboon in aad wax ala wixii aad qaban kartid aad ka qabatid dhinacaaga oo aad dad kaaga iyo dalkaaga horumarisid .
Waxaa jira Xasan �bshir Faarah oo aan anigu goob joog ahaa khudbad uu ka jeediyay Holland / Heeg oo uu lahaa wax Puntilland layiraahdo majiraan qaran baa jira ee gobol majiro waa meeshii uu u dhashay ama ka soo jeedo ama wax ku yahay.
Cabdullahi Yuusuf waa hogaamiye dhab ah , anigu madiidani ka mana soo horjeedo in la dhaliilo oo qofku wax waa khaldi karaa ku mucaarad wax ka sheeg isaga ,samee loolan siyaasadeed oo aadan xero dhaaf samaynayn ku hay mar walba maskaxda wadani nimada adiga oo diidan nin kaan, hadan ku fakar in aadan horseedin wax burburinkara jiritaanka dhulka, xafidaada nabada,
horseedka horumarka iyo ganacsi ama dhaqaalaha.
Dadka ku wada nool ama wada daga Puntilland waa dad wada dhashay, oo isku wada abtirsada, in ay siyaasadu ku galiso ma aha in aad is ku dirto laba wada dhashay adna kula dhashay , Jidgooyo aad socotada hor is taagayso dad maata ah oo adiga kula dhashay, siiso fursad tuug dadka dhaca in uu magac reer wax ku dhaco.
Waxaan anigu oran karaa sharaftii iyo magicii reer aanu lahayn yayna shakhsiyaad dana gaara wata bur burinin.
Ninka maanta u lajooga C/qaasim oo aan ku arkayay webpagyada maanta, in ay dadkii uu ka dhashay ka tashadeen oo yiraahdeen hana ceebayne magac danbe oo darajo ah ha sheeganin.
Muduloodna ay ku dagaalamayaan dhulkooda siday uga xorayn lahaayeen dadka aan u dhalan.